ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း: 06/20/12
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများအဖွဲ့ရဲ့ တာဝန်ပေးချက်အရ ၈၈ မျိုး ဆက်ကျောင်းသူ မနီလာသိန်း၊ မမီးမီးတို့ ဦးဆောင်သော ဘေးဒုက္ခကြုံတွေ့နေရသူများအား နှစ်သိမ့်အားပေးရေး၊ အခြေအနေမှန်များ သိရှိနိုင်ရေး အချက်အလက်ရှာဖွေစုဆောင်းရေး အဖွဲ့သည် ယနေ့ ဇွန်လ ၂၀ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းက ရန်ကုန် လေဆိပ်မှ ရခိုင်ပြည်နယ်သို့ လေကြောင်းခရီးဖြင့် စတင် ထွက်ခွာ သွားကြကြောင်း သတင်းရရှိပါတယ်။
ဒီအပြင် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများအဖွဲ့က ဦးဆောင်ပြီး အလှူခံရရှိတဲ့ ငွေကြေး၊ ပစ္စည်း၊ ဆေးဝါး၊ ရိက္ခာ၊ အ၀တ် အထည်များကိုလည်း ခရီးစဉ်အတွင်း ဆက်လက်လှူဒါန်းသွားကြမှာဖြစ်ပြီး ဆက်လက်လှူဒါန်းနိုင်ရန် စိတ်ပါ ၀င်စား၍ အလှူဒါနပြုလိုကြသော ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ က မည်သည့် စေတနာရှင်များကမဆို ၈၈ မျိုး ဆက် ကျောင်းသားများအဖွဲ့ရဲ့ ယာယီ ရုံးခန်း တည်ရှိရာ အမှတ် (၂၈၄)/(က) ဝေဇယန္တာလမ်း ၁၆/၃ ရပ်ကွက် သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ သီရိဂုဏ်အိမ်ရာဆိုင်းဘုတ်ဘေးရှိ အဆောက်အဦ ရှိရာသို့ လာရောက် လှူဒါန်းနိုင် ပါ ကြောင်း နှိုးဆော်ထားတာလည်း သိရပါတယ်။
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 3:10 PM No comments:
Wednesday, June 20, 2012 အိမ့်သံစဉ်
ဓာတ်ပုံများ - Htein Lin
မြန်မာနိုင်ငံက နံမည်ကျော် လူရွှင်တော် ကိုဇာဂနာဟာ ဒပ်ဗလင်ကို ရောက်ရှိလာတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို သွားရောက်ကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်။
ကမ္ဘာကျော် U2 အဆိုတော် ဘိုနိုရဲ့ ကိုယ်ပိုင် ဂျက်လေယာဉ်နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က အိုင်ယာလန်နိုင်ငံ ကို လိုက်ပါလာခဲ့ပြီး ဆုများလက်ခံတာ၊ တေး ဂီတတွေနဲ့ ဖျော်ဖြေတာတွေကို ရှု့စားခဲ့ပါတယ်။ အဆိုတော် ဘိုနိုနဲ့လည်း ကိုဇာဂနာတို့ ဆုံဆည်းဖြစ်ကြပြီး အခုလို ဘိုနိုနဲ့ အတူ ဘိုဇာ ( ကိုဇာဂနာ) ကို မြင်တွေ့ရ တာဖြစ်ပါတယ်။
ဘိုနိုရဲ့ လက်ထဲက ကိုင်ထားတဲ့ မျောက်ရုပ်ကလေးက မျက်စေ့တွေကို ပိတ်ထားပါတယ်။ ဘိုဇာ ကိုင်ထား တဲ့ မျောက်ရုပ်ကလေးကတော့ နားမကြားရအောင် ပိတ်ထားပါတယ်။
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 3:07 PM No comments:
ဒေါ်စုအား Amnesty International အဖွဲ့ က ချီးမြှင့်တဲ့ Ambassador Of Conscience ဆုလက်ခံရရှိတဲ့ ဓါတ်ပုံများ
Ambassador Of Conscience ဆုပေးပွဲကိုတက်ရောက်လာတဲ့ 007 ဂျိမ်းစပွန်းမင်းသားကြီး
ဒေါ်စုအား Amnesty International အဖွဲ့ က ချီးမြှင့်တဲ့ Ambassador Of Conscience ဆုလက်ခံရရှိတဲ့ ဓါတ်ပုံများကို ပေါင်းစုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 2:49 PM No comments:
အိုင်ယာလန်နိုင်ငံ Dublin မြို့Bord Gais Energy Theater မှာပြုလုပ်တဲ့ Electric Burma Concert ရုပ်သံများ
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 2:03 PM No comments:
Daw Aung San Su Kyi 67 နှစ်မြောက်မွေးနေ့ အမှတ်တရ
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 1:52 PM No comments:
Happy Birthday Aung San Suu Kyi ရုပ်သံ
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 1:47 PM No comments:
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို LSE ကနေ မွေးနေ့လက်ဆောင် (၅) ခုပေးတယ်။
ပထမတခုက ပန်းလေး၊ နောက်တခုက စာအုပ်လေး၊ နောက်တခုက LSE ဦးထုပ်လေး။ အမေက ဦးထုပ်လေး ဆောင်းပြပြီး လက်ဆောင်ပေးတာ ပြီးသွားပြီ ထင်လို့ ပြန်ထိုင်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ တယောက်က နောက်တခု ကျန်သေးတယ်တဲ့ မင်းအဖေ ဒီကိုလာတုန်းက ရိုက်ခဲ့တဲ့ ဓါတ်ပုံလေး ဆိုပြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ပုံလေးကို မှန်ဘောင် သွင်းထားတဲ့ လက်ဆောင်လေး အမေ့ရဲ့ အံ့သြ၀မ်းသာ သွားတဲ့ မျက်ဝန်းလေးနဲ့ အားလုံးကို ပုံလေး ထောင်ပြလိုက်တာ မြင်ရတဲ့သူတွေ ၀မ်းနည်း ၀မ်းသာ ဖြစ်စေတယ်။ နောက်ဆုံး လက်ဆောင် တခုကတော့ အမေ့အတွက် မွေးနေ့ သီချင်းလေးပါ။ နောက်ဆုံး အပိုဒ်လေးမှား အားလုံးက "Happy Birthday to you" ဆိုပြီး လိုက်ဆိုတော့ အမေက ခေါင်းလေးလှုပ်ပြီး စည်းချက်လိုက်လို့ ပြုံးပြလိုက်တယ်။
ပျော်ရွှင်ပါစေ အမေရယ်... လေးစား ယုံကြည်ခြင်းတွေနဲ့ အတူ အမေ့ကို ဂရုဏာ ပိုမိတယ်။
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 1:43 PM No comments:
၂ဝဝ၉ ခုနှစ်က ချီးမြှင့်ဂုဏ်ပြုခံရတဲ့ Ambassador of Conscience Award ဆုကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လက်ခံရယူ
on Tuesday, June 19, 2012 at 10:13pm ·
Ambassador of Conscience Award ဆုဟာ နိုင်ငံတကာ လွတ်ငြိမ်းချမ်းခွင့်အဖွဲ့ (Amnesty International) က ပေးအပ်ချီးမြှင့်တဲ့ဆုတွေထဲမှာ အမြင့်ဆုံးဆု ဖြစ်ပါတယ်။ လူ့အခွင့်အရေးတွေ၊ လူတွေမှာ ထားရှိအပ်တဲ့ အသိတရားတွေကို မြှင့်တင်ပေးရာမှာ ထူးထူးခြားခြား ဦးဆောင်ပေးနိုင်သူ ပုဂ္ဂိုလ်တဦးချင်းကို နှစ်စဉ် ချီးမြှင့် ဂုဏ်ပြုတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဆုကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ၂ဝဝ၉ ခုနှစ်ကတည်းက ချီးမြှင့်ခံရတာဖြစ်ပေမယ့် အခု (၁၉-၆-၂ဝ၁၂) နေ့မှ ဆုကို လက်ခံယူတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဆုကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထက် စောပြီး ရထားဖူးသူတွေကတော့ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
2008 - Peter Gabriel, musician and humanitarian activist
2006 - Nelson Mandela, former President of South Africa
2005 - Irish rock band U2 and their manager Paul McGuinness
2004 - Mary Robinson, former President of Ireland and UN High Commissioner for Human Rights - Hilda Morales Trujillo, Guatemalan women's rights activist
2003 - Václav Havel, former President of the Czech Republic
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ဒီလို နိုင်ငံတကာက လေးစားတဲ့ ဆုမျိုး ဂုဏ်ပြု ချီးမြှင့်ခံရတဲ့အတွက် မြန်မာပြည်သူတွေ သိပ်ကို ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ဖြစ်နေမိကြမှာ သေချာပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွက်လည်း အထူးပဲ ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။
ဒီညနေကတော့ ဒပ်ဘလင်ရဲ့ Grand Canal Theatre မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းးစုကြည်ကို Electric Burma concert နဲ့ ဂုဏ်ပြုနေကြပါပြီ။ ၂ဝဝ၅ ခုနှစ်က ဒီဆုကို ရရှိဖူးတဲ့ ဘိုနို ကိုယ်တိုင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဆုချီးမြှင့် ဂုဏ်ပြုသွားပါတယ်။
U2 Bono အပြည့်အစုံ ဖတ်ရန်
Happy birthday to Daw Aung San Suu Kyi !
Long Live Daw Aung San Suu Kyi !
A family re-union is alwaysajoy.
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 1:23 PM No comments:
မွေးနေ့ကိတ် ခွဲနေပါတယ်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အန်တီနီတာ ဘီဘီစီ ကပါ...။
၆၇ နှစ်မြောက် အမေ့မွေးနေ့ .....................
( အမေ )
ဒီစကားလေးနှစ်ခွန်းနဲ့ အမေ့အတွက် သား၇ဲ့ ဆုတောင်းတွေအများကြီး ပါ
သွားပါပြီး..ဒီဆုတောင်းတွေဟာ သားသာသိတဲ့ သား၇င်ထဲက မေတ္တာဆု
Myat Phone Linn
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 1:08 PM No comments:
on Tuesday, June 19, 2012 at 12:46pm ·
Art -Feraya Maetai Ullathorne
ဒီနေ့ ဇွန်လ၁၉ရက်နေ့ဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ၆၇နှစ်မြောက်မွေးနေ့ မင်္ဂလာအခါသမယဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ပေါင်း ၂၄နှစ်ကြာ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေးအတွက် မိသားစုဘ၀ မိမိလွတ်လပ်ခွင့် မိမိအသက် အားလုံးကို ပေးဆက်ပြီးအလုပ်လုပ်လာခဲ့တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ပထမဆုံး တိုင်းပြည်ပြင်ပကို ထွက်လာတဲ့ ဒီခရီး မှာ နော်ဝေးရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေက မိခင်ဒီမိုကရေစီ လို့ခေါ်ဆို ဂါဝရပြု ကြိုဆိုလိုက်ကြပါတယ်။ အခုတော့ လူထုချစ်တဲ့ခေါင်းဆောင်ဟာ အင်္ဂလန်နိုင်ငံကိုလည်း ရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက် အင်္ဂလန်နိုင်ငံရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက်ကြက်သရေမင်္ဂလာအရှိဆုံးအခါသမယတွေ လို့ ဆိုရပါမယ်။ အင်္ဂလန်နိုင်ငံက ဂုဏ်ပြုကြိုဆိုသလို အင်္ဂလန်မှာရှိနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးအတွက်လည်းမမေ့နိုင်စရာ သမိုင်းဝင်နေ့တွေဖြစ်ခဲ့ပါပြီ ။ ကျွန်တော်တို့ချစ်ခင်မြတ်နိုးတဲ့၊ တန်ဖိုးထားလေးစားတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဂုဏ်သိက္ခာရှိစွာထိုက်တန်စွာ လူချင်းတွေ့ဆုံ ပြီး လှိုက်လှဲနွေးထွေးစွာကြိုဆိုခွင့် ၊ စကားပြောဆိုခွင့်၊ မေတ္တာနဲ့ ဂါရ၀တရားတွေ အပြန်အလှန် ဖလှယ်ခွင့် ရခဲ့ကြပါပြီ။
တကယ်တော့ ကမ္ဘာ့အရှေ့နဲ့ အနောက်၊ ကီလိုမီတာ( ၈၀၀၀)ထောင်ကျော်ဆိုတဲ့ ခရီး ဟာ ခုခေတ်မှာ ဝေးတဲ့ခရီးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ခုလို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကမ္ဘာ့အရှေ့ခြမ်းကနေ အနောက်ခြမ်း ၊ အာရှကနေ ဥရောပကို ကမ္ဘာသိအမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်၊ သိက္ခာရှိတဲ့ ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းစံပြုခေါင်းဆောင် တယောက်အနေနဲ့ လာခဲ့ရတဲ့ ခရီးကတော့ သိတ်ကို ခက်ခဲ ရှည်ကြာခဲ့ရပါတယ်။ တိုင်းပြည်မှာ သွေးထွက်သံယိုမှု အနဲဆုံး နစ်နာဆုံးရှုံးကြရမှုတွေအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်လို့
ရွေးခြယ်ထားတဲ့ နိုင်ငံရေး အကြမ်းမဖက်လမ်းစဉ်ဆိုတာလည်းတကယ်တော့ သာမန်ပုထုဇဉ်လူသားတယောက်အနေနဲ့ အင်မတန်ခက်ခဲတဲ့ ရွေးခြယ်ပိုင်းဖြတ်ရမှုမျိုး ။ဒါကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာအခက်အခဲမျိုးစုံကြားကနေ နာနာကျဉ်ကျဉ်လွယ်ပိုး ခဲ့။ မဆုတ်မနစ်စွဲကိုင်ခဲ့ရတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ မြန်မာပြည်အတွက် ကြီးမားတဲ့ အနတ္တမေတ္တာ၊ ကရုဏာ၊ ထက်မြက်တဲ့ ညာဏ်၊ အမြော်အမြင်ကြီးမှု၊ အရာရာကို စိတ်ရှည်သီးခံခွင့်လွှတ်စိတ်တွေနဲ့ ခေါင်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ ထူးခြားတဲ့ ပါရမီတွေနဲ့ ဖြည့်ဆည်းလာတဲ့ မိခင်တယောက် ရခဲလှတဲ့ သားရတနာတပါးအတွက်အသက်အန္တရာယ်ကြားကနေ အချိန်ရင့်ကျက်တဲ့အထိစောင့်စား သန္ဓေဆောင်ခဲ့ရ သလိုမျိုး၊ ကြီးစွာသော နာကျဉ်မှု အာဝေနိက ဝေဒနာမျိုးစုံ ကို ကြိတ်မှိတ်ခံစားရင်း သူ့ရင်သွေးကို မွေးခဲ့ရသလိုမျိုး ဒီနေ့ မိခင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာလည်း ခက်ခဲလှတဲ့ ဒီမိုကရေစီ သားရတနာတပါးကို မြန်မာပြည်အတွက် မွေးဖွားပေးခဲ့ပြီလို့ တင်စားပြောမယ်ဆိုပြောလို့ရပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ငယ်ရွယ်သူ အားလုံးက အမေလို့ ခေါ်ချင်ကြပါတယ်။အဲလိုခေါ်နေကြ ၊ ခေါ်ချင်နေကြတာဟာ တကယ့်မိခင်ကို ချစ်တဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာစိတ်မျိုး နဲ့ နှလုံးသားထဲကခေါ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ မိခင်နဲ့တူတဲ့မေတ္တာမျိုးထားနိုင်တဲ့ ခေါင်းဆောင်။ ရဲဘော်ရဲဖက်စိတ်ထားမျိုးထားနိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်၊ နိုင်ငံရေးမှာ ယုံကြည်တာကို အနစ်နာခံဆောင်ရွက်တဲ့ သူတော်စဉ်တပါးလို့တောင် ပြောလို့ရပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့အားလုံး ဒီနေ့ အမေ့အတွက် ဂုဏ်ယူနေရတယ်။ အင်္ဂလန်မှာ ဘယ်သူ့ကိုမေးမေး မြန်မာပြည်ကို သိသလားလို့ မေးရင် ဝေတေ၀ါးတားဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ် ။ ဒါပေမယ့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နံမည် တပ်မေးလိုက်တာနဲ့သိတဲ့လူတွေချည်းပါပဲ။ အမေ့ဂုဏ်သတင်းဟာ မြန်မာပြည်ရဲ့ဂုဏ်သတင်း။အမေဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက်ကြက်သရေဆောင်။
အမေလွတ်မြောက်လာပြီး တဲ့ ဒီတနှစ်အတွင်း ကမ္ဘာမှာရှိတဲ့ ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်တွေ အများဆုံး သွားရောက်တွေ့ဆုံတဲ့ ဒီနေ့ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်တယောက် ကိုပြပါဆိုရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပြရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ထူးထူးခြားခြား ဒါဟာ ဘာကို ပြသလဲဆို တကယ့် ခေါင်းဆောင်အစစ်ဟာ တခါတလေမှာ မဲပြားတွေမလိုပဲ အလိုလို တရားဝင်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါပဲ။ ဒီမိုကရေစီမှာ ဆန္ဒမဲဆိုတာ တရားဝင်မှုအတွက်အလွန်အရေးကြီးတာမှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တခါတခါမှာမဲပြားနဲ့ရွေးခြယ်ခွင့် မရတဲ့အချိန်မျိုးတွေလည်း ရှိနေတတ်ပါတယ်။ ဒီအခါမှာ ပြည်သူ လူထုထံက နှလုံးသားနဲ့ ရွေးခြယ်တင်မြှောက်ခံရတဲ့ ဖြစ်စဉ်မျိုးလည်း အသေအခြာရှိနေပြီဆိုတာဒီနေ့ မြန်မာပြည်ကို ကြည့်ရင် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိနိုင်ကြပါတယ်။ထူထူထဲထဲအစောင့်အကြပ်တွေမလိုပဲ မည်ကာမတ်တပ်ခေါင်းဆောင်မျိုးဆိုတာထက် လူထုကြားကို လက်နက်အကာအကွယ် အစောင့်အရှောက်တွေမပါပဲသွားနိုင်လာနိုင်၊ လူထုကတကယ့်အူလှိုက်သဲလှိုက် နွေးထွေးပျူငှါစွာကြိုဆိုခြင်းခံရ၊ ကိုယ်တိုင်ကလည်း လူထု ရင်ခုန်သံတသားတည်း
ပျော်ရွှင်ကျေနပ်စွာ သွားခွင့်ရတဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ကို ကျွန်တော်တို့ ဒီနေ့ ဂုဏ်ယူစွာ ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ ပြီဖြစ်ပါတယ်။
ရာစုနှစ်တ၀က်မက စနစ်ဆိုးတခုအောက်က စစ်မီးလျှံတွေကြားက နေ ရုန်းထအားယူရင်း ဒီနေ့ အမိမြန်မာနိုင်ငံဟာ နာကျင်ချိနဲ့နေပါတယ်။ ပြသနာပေါင်းစုံ သံသယများစွာ အသားကျနေတဲ့ ပျက်စီးခြင်းများစွာကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်နေရပါတယ်။ ဒါတွေဟာ နတ်ရေကန်ထဲပစ်ချ တမဟုတ်ချင်းကုစားလိုက်လို့ ရတဲ့ ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
ပြောမယ်ဆို မြန်မာပြည်မှာ မွေးဖွါးကာစ ဒီမိုကရေစီ သန္ဓေသားနုနု လေးဟာ မွေးချိန်တန်မမွေးခဲ့ရလို့ သူ့ခင်မျာ အင်မတန်မှ အားအင်ချိနဲ့ နေခဲ့ ရေမွန်းနေခဲ့ရှာပါတယ်။ ခုထိ ဖန်ပေါင်းချောင်ထဲမှာ အသည်းအသန်ကြပ်မတ်နေရတုန်းလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ စိတ်မချရသေးတဲ့အချိန် ။ စိုးရိမ်နေရဆဲအချိန်။နိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်နဲ့ အကျဉ်းကျခံနေရသူတွေအားလုံး အပြီးတိုင်လွတ်မြောက်မလာကြသေးတဲ့အချိန်။ တချို့နေရာတွေမှာလောင်မြှိုက်ဆဲ အငွေ့မသေသေးတဲ့ ပြည်တွင်းစစ်မီးတွေ ကို ငြိမ်းသတ်ဘို့တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုလက်နက်ကိုင်တွေအားလုံးနဲ့အစိုးရအကြား စေ့စပ်ဆွေးနွေးနေရဆဲ၊ အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုတွေတည်ဆောက်ရဆဲကာလဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးအားလုံးပါဝင်ဆောင်ရွက်မှဖြစ်နိုင်မယ်။ကျမ တယောက်တည်းနဲ့ ပြီးမြောက်နိုင်မယ့်ကိစ္စတွေမဟုတ်ဘူးလို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အမြဲတန်းပြောပါတယ်။
ဆိုတာတွေဟာ ဧရာမ ကျော်လွှားရမယ့် အခက်အခဲဆုံး အစိတ်အပိုင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ တကယ့် အနှစ်သာရနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ ခိုင်မာတဲ့ ဒီမိုကရေစီ ဖွဲ့စည်းပုံအုတ်မြစ်ကို အခြေမခံနိုင်သေးပဲ ဒီမိုကရေစီသန္ဓေသား ဟာ စိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေကလွန်မြောက်သွားပြီ လို့ပြောလို့မရပါဘူး။ ဖန်ပေါင်းချောင်ထဲက ထွက်လာနိုင်ပြီ။ အသည်းအသန်ကြပ်မတ်ခန်းကကျွတ်လွတ်ခဲ့ပြီလို့ပြောလို့မရပါဘူး။
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ အားတက်စရာက မိခင်ဒီမိုကရေစီကြီးက သူ့မျိုးဆက်များစွာကို နာကျဉ်ခြင်းကြီးစွာကြားကနေ မွေးထုတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ သူခင်းတဲ့လမ်းကို ရဲရဲလှမ်းတက်လာတဲ့ ဒီမိုကရေစီ မျိုးဆက်တွေကို ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည်တနံတလျားမှာ တွေ့နေရပါပြီ။ နှစ်ပေါင်း ၂၀ကျော်မိခင်တယောက်ရဲ့ ချစ်ခြင်းနဲ့ရင်အုပ်မကွာစောင့်ရှောက်မွေးခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်တွေ လူမှုရေးမျိုးဆက်တွေဟာ
အမေ့ခြေရာကိုနင်း အမေ့ နှလုံးသားပုံရိပ်ကိုကိုးကွယ် အမေ့ကျေးဇူးကို အောက်မေ့ရင်း ဆက်လက်လျှောက်လှမ်းသွားကြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဇွန်လ ၁၆ ရက်နေ့က အမေရိကန်နိုင်ငံသား Nik Wallenda ဆိုသူဟာ အမေရိကန် နဲ့ ကနေဒါ နှစ် နိုင်ငံကြားက ကမ္ဘာကျော် နိုင်ရာဂရာရေတံခွန်ကြီးပေါ်မှာဖြတ်သွယ်ထားတဲ့ ပေ ၁၈၀၀ ရှည်-ကြိုးတန်းပေါ်ကနေ ဖြတ်လျှောက်သွားခဲ့ပါတယ်။
တဝေါဝေါကျနေတဲ့ ရေတံခွန်ကြီးဆီက လွင့်လာတဲ့ရေမှုန်ရေမွှားတွေကြား။ တဟူးဟူး တိုက်နေတဲ့လေ တွေကြားကနေ မပြတ်သောသတိ။ ခိုင်မာတဲ့ စိတ်ဓါတ်။ တည်ငြိမ်တဲ့ သူရသတ္တိ နဲ့ ဖြတ်သွားနိုင်သူ။ ရုပ်သံမှတ်တမ်းတင်နေသူက ရုတ်တရက် ကြိုးတန်းကို ကုတ်တွယ်ထားတဲ့ သူ့ခြေထောက်တွေကို အနီးကပ်ရိုက်ပြလိုက်ပါတယ်။ သတင်းကြေငြာသူက ကြိုးတန်းကို ကုတ်တွယ်ထားတဲ့ သူ့ဖိနပ်အကြောင်းကို ပြောပြပါတယ်။ သူ့ဖိနပ်ကို သူ့မိခင်က ဒရယ်တမျိုး( elk ) ရဲ့ အရေခွံနဲ့ အချိန်ယူပြီး ကိုယ်တိုင်သေချာချုပ်ပေးခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ သူ့စွန့်စားခန်းကို ကြည့်နေတဲ့ ကမ္ဘာတ၀ှမ်းက ပရိသတ် သန်းတထောင်လောက်အတွက် မိခင်တွေကို သတိရစရာပါ။
ကျွန်တော်တို့မှာလည်းကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ် ရှေ့ခရီးတွေအတွက် သူ့လိုအမေမျိုးရထားတာသေချာပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ အနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက် စနစ်ကျန သေသတ်တဲ့ ခရီးသွားဖိနပ်တစုံကို မိခင်ကြီးတယောက်ရဲ့ ကြီးမားတဲ့ချစ်ခြင်း မေတ္တာမျိုးနဲ့ ချုပ်ပေးခဲ့ပြီလို့ ကျွန်တော်တို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
ခွန်ဆိုင်း ( ၁၉. ၆. ၂၀၁၂ )
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 12:57 PM No comments:
( ၆၇ ) နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ဆုတောင်း
by Ko Baloi on Wednesday, June 20, 2012 at 7:11am ·
ယနေ့ကျရောက်လာသည့် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၉ ရက်နေ့သည် ပြည်တွင်း/ ပ ပြည်သူအများထောက်ခံမှုကိုရယူထားသည့်
လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ထူးမြတ်သည့်မွေးနေ့အခါသမယဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်- နိူင်ငံတကာခေါင်းဆောင်
များ၏ ထောက်ခံမှုကိုလည်းရရှိထားသည့် ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး၏ မွေးနေ့အခါသမယဆိုရင်လည်း မှားမည်မဟုတ်ချေ။
သူမ၏ စွမ်းပကားကြောင့် မြန်မာ့အရေးသည် ကမ္ဘာ့အလယ်တွင် ထင်ပေါ်ကျော်ကြားခဲ့သည်။ မြန်မာ့နိူင်ငံရေးလောကတွင်
အမျိုးမျိုးသောခြိမ်းခြောက်မှုတို့နှင့် လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခြင်းတို့ကို အလီလီကြုံတွေ့ခဲ့သော်လည်း မကြောက်မရွံ နောက်မတွန့်ပဲ
တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက် အသက်ကိုပေးဆပ်၍ တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သည့် ငြိမ်းချမ်းရေးမိခင်ကြီးလည်းဖြစ်သည်။
သူမသည် သူမ၏ နိူင်ငံတော်နှင့် ပြည်သူအတွက်ဆို မိမိ၏ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့် နိူင်ငံရေးကိုမငဲ့ကွက်ပဲ၊ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်
မြတ်ရေး အတွက် ရန်သူမိတ်ဆွေ ခွဲမခြားပဲ မည်သူနဲ့မဆို လက်တွဲအလုပ်လုပ်လိုသည့် ရိုးသားသည့်နိူင်ငံရေးစိတ်ဓါတ်ရှိသူ
ဖြစ်သည်။ အခုအခါ သူမ၏ ပြည်ပခရီးစဉ်တွင် နိူင်ငံခေါင်းဆောင်ကြီးများမှ တလေးတစားနဲ့ ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်ကြီးတစ်ဦး
အသွင်နဲ့ တခန်းတနားခရီးဦးကိုကြိုဆိုမှုပြုသည်ကို ဂုဏ်ယူအားရကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းလောက်အောင် တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ အခုအခါ
အသက် ၆၇ နှစ်ပြည့်ပြီးဖြစ်တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် လောကဓံကိုခံနိူင်စွမ်းပေမယ့် ပျိုမြစ်ချင်းကိုတိုက်စားနေသည့် ဇရာဒဏ်ကိုတော့တွန်းလှန်နိူင်စွမ်း မရှိတော့ပါ။ ဇရာအိုအရွယ်လာပြီးဖြစ်တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ကျမ္မာရေးကို စိုးရိမ်ပူ
ပန်နေကြသည့် ပြည်တွင်း/ ပ ပြည်သူအများသည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ၆၇ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
အသက်ရာကော်ရှည်ပြီး ကျမ္မာပါစေကြောင်း အခါခါဆုတောင်းနေကြပါသည်။ ထိုကြောင့် ကျနော်သည်လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစု
ကြည် ကိုယ်၏ ကျမ္မာခြင်း၊ စိတ်၏ ချမ်းသာခြင်းတို့နှင့် ပြည့်စုံစေပြီး လိုအင်ဆန္ဒဟူသမျှ အမြန်ဆုံးထမြောက်အောင်မြင်ပါစေလို့
ဆုမွန်ကောင်းတောင်း မေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်..။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တိုင်းပြည်အကျိုး ဆထက်တပိုး ထမ်းရွက်နိူင်ပါစေ။
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 12:52 PM No comments:
Wednesday, June 20, 2012 at 7:04am ·
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 12:44 PM No comments:
ကမ္ဘာ့ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ကျုပ်တို့ အမေ
ကမ္ဘာ့ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ကျုပ်တို့ အမေ ★
မျက်ရည်ကျနေ့ ရက်တွေများနေလို့ 
လူ ဆင်းရဲတာ(သားတို့ )မကြောက်တက်တော့ပေမဲ့
အမေ စိတ်ဆင်းရဲမှာ(သားတို့ ) ကြောက်လွန်းလို့ ပါအမေ..။
အမေ့ရာဇ၀င် မှာ
လက်ရှိသားတို့ ဘ၀တွေမှာ မပြောင်မရောင်ဖြစ်နေရတာကြောင့်
ဒီမြေမှာမွေး ဒီရေနဲ့ ရှင်သန်သူတိုင်း
ရန်လိုသူတွေ(တစ်ချို့ )အတွက်နဲ့ 
ခံစားသိနဲ့ သားတို့ မြင်သိပါရဲ့ ..၊
ပူဆွေးမျက်ရည်တော့မကျလိုက်ပါနဲ့...၊
အမေ့ကို ၀ိုင်းကြည့်နေပြီ အမေ..။
graphic design : ko myoe
ဂျပန် မှာ ဒေါ်စု ၆၇ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ် ငါးလွတ်၊ သွေးလှူ ပွဲ
by Tun Wai
on Wednesday, June 20, 2012 at
မိုးသောက်ကြယ် သတင်း ..
ဇွန်လ ၁၉ ရက်နေ့မှာကျရောက်တဲ့ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် မိုးသောက်ကြယ်စာကြည့်တိုက်အဖွဲ့သားများက ဇီဝိတဒါနအဖြစ် ငါးလွှတ်တာတို့၊ သွေးလှူတာတို့ကို ဦးစွာပထမပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါနဲ့ဆို ၁၂ ကြိမ်ရှိသွားပါပြီတဲ့။ ငါးလွှတ်တာကိုတော့ Kawaguchi ချောင်းမှာ ပြုလုပ်ပြီး၊ သွေးလှူတာကိုတော့ တိုကျို လျှပ်စစ်မြို့တော်လို့ တင်စားခေါ်ဝေါ်တဲ့Akihabara ဗဟိုသွေးလှူဘဏ်မှာ ပြုလုပ်ကြတာပါ။ သွေးလှူကြသူ ၁၃ ဦးရှိပေမယ့် (မောင်ရှင်နဲ့ကိုထွန်းဝေအပါအ၀င်) ၁၀ သာ သွေးလှူခွင့်ရရှိပါတယ်။ ပြုခဲ့တဲ့ ကောင်းမှုအတွက်လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်တကွ အားလုံးသော ဝေနေယျသတ္တ၀ါအပေါင်းကိုလည်း ပေးဝေပါတယ်။ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ သာဓု ခေါ်နိုင်ပါတယ်။ မကြာမီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာတော့ နိုင်-ကျဉ်း-ထောက် လုပ်ငန်းအတွက် အလှူငွေပေးအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကျန်းမာပါစေ။ အမိ့မြန်မာပြည်ကြီးလည်း ဒေါ်စုဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒအတိုင်း ထပ်တူထပ်မျှကျပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။ထို့ အပြင် တက္ကသိုလ် ဘုန်းကြွယ် ကဗျာဆရာကြီး ၊ဆရာ မင်းသုဝဏ် နှင့် ကိုထွန်းဝေတို့ မှကဗျာ များဖြင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့ အတွက် ထပ်ဆင့် သကာရည်လောင်းခဲ့ကြပါသေးတယ်.။
တက္ကသိုလ်ဘုန်းကြွယ် ကဗျာဆရာကြီး မှ...
ဒါနဲ့ ဆရာက ချပ်တင်ထဲမှာ
မွေးရက်မှာ အမှတ်တရ ရဖို့အရေး
တက္ကသိုလ်ဘုန်းကြွယ် (ဇွန် ၁၉ ၂၀၁၂)
ဒေါ်စု နဲ့ တကွ လူထုအားလုံးက
by Victor Tan on Tuesday, June 19, 2012 at 8:46am ..။
Maung Shin မှလည်း ဆရာကြီးမင်းသုဝဏ် ရဲ့ ကဗျာဖြင့်ဖော်ပြထားပါသေးတယ်
ပြည်သူ့အောင်ပန်း ၊ မြဲဆင်မြန်းသည့်
အောင်ဆန်းစုကြည် ၊ ရဲဇာနည်ကို
မြန်ပြည်တလွှား ၊ ချစ်သူ များခဲ့။
တို့အား တို့အင် ၊ တို့ အရှင်ကို
ကြည်ရွှင်စေသော ၊ မာစေသောဟု
မွေးသောနေ့မှာ ၊ တို့သူငါသည်
မေတ္တာ ကြည်လင် ရွှင်ရွှင်ပို့။
ဒေါင်းမျိုး အိုးဝေ တွန်စေဖို့
အီးမေးလ်ထဲရောက်လာလို့ နောက် နှစ်သက်လို့ တင်လိုက်ပါတယ် လို့ မောင်ရှင်ကဆိုထားပါတယ်..။
သွေးအလှူမို့သန့် ရှင်းတယ်
လို့ ဖော်ပြပါရှိပါတယ်။ယခုလထုတ် ဂျပန်နိုင်ငံမှထုတ်ဝေတဲ့ မိုးသောက်ကြယ်စာကြည့်တိုက်မှ လည်း ဝေေ၀ဆာဆာ
ဆက်လက် ထုတ်ဝေသွားမှာဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြပါရှိပါတယ်။
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 12:34 PM No comments:
တတိယအကြိမ်မြောက် အညတရဆုရရှိသူ ဆုရှင် (၅) ဦးအား ချီးမြှင့်
မိတ်ဆွေများအားလုံးခင်ဗျာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ (ရုံးချုပ်) ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ၆၇ နှစ်မြောက် မွေးနေ့ (မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသမီးများနေ့) အခမ်းအနားတွင် တတိယအကြိမ်မြောက် အညတရသူရဲကောင်းဆုရရှိသူ ဆုရှင် (၅) ဦးအား ဆုချီးမြှင့်ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။ ဆုများအား အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ၏ နာယကများဖြစ်ကြသော ဘဘဦးတင်ဦးနှင့် ဘဘဦးဝင်းတင်တို့က ပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့ကြပါသည်။ ဆုအနေဖြင့် ကျပ်ငွေ (၁၀) သိန်းနှင့်အတူ အညတရသူရဲကောင်းဆုတံဆိပ် ကိုပါ ပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့ပါသည်။ ဆုရှင်များကိုယ်စား ယခုနှစ်အစောပိုင်းက ထောင်မှ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့သော ဇိုမီးအမျိုးသားကွန်ဂရက်မှ ပူအန်ထော်နီကပ်ခန်ခွာ က ကျေးဇူးတင်စကား ပြန်လည်ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ဆုများအား ကာယကံရှင် ကိုအန်ထော်နီ နှင့် မလှလှမော် တို့ နှစ်ဦးသာ ကိုယ်တိုင်လက်ခံရယူနိုင်ခဲ့ပြီး ဆရာတော် ဦးခေမာစာရ ကတော့ အစောပိုင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားမှုအရ တရားရိပ်သာဝင်နေကြောင်း သိရှိခဲ့ရပြီး၊ ဒေါက်တာကျော်ကျော်နှင့် ကိုလက်ျာထွန်းတို့ နှစ်ဦးမှာတော့ လက်ရှိထောင်ကျခံနေရဆဲ ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ကျနော်တို့ ကော်မတီက လက်ခံရရှိထားသော အခမ်းအနားဓတ်ပုံများနှင့်အတူ Mizzima သတင်းဌါန၏ သတင်းဖော်ပြချက်ကိုပါ ပေးပို့အပ်ပါသည်။ ကော်မတီအနေဖြင့် သြဂုတ်လ(၅) ရက်နေ့တွင် တတိယအကြိမ်မြောက် အညတရသူရဲကောင်း ဂုဏ်ပြုပွဲအခမ်းအနားတရပ် အား ဂျပန်နိုင်ငံ၊ တိုကျို မြို့တွင် ကျင်းပသွားနိုင်ရန် စီစဉ်လျှက်ရှိပါကြောင်းနှင့် အဆိုပါအခမ်းအနားအတွက် သူရဲကောင်းဂုဏ်ပြု ကဗျာများ ပေးပို့ပေးနိုင်ပါရန် နှင့် အခြားဆောင်ရွက်စေလိုသော အကြောင်းအရာများအား အကြံပြုပေးကြပါရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။ ကော်မတီအနေဖြင့် ငွေစာရင်းရှင်းတမ်းနှင်အတူ နောက်ဆုံးရ အလှူရှင်စာရင်းအား မကြာမီအချိန်အတွင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် ဆုချီးမျြင့်နိုင်ရေးအတွက် အရှိန်အဟုန်မပျက် ဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေး အကြာင်းကြားအပ်ပါသည်။ အမျိုးသားရေး စိတ်ဓါတ်အပြည့်ဖြင့် ငွေကြေးထည့်ဝင်လှူဒါန်းခဲ့ကြသူများ၊ ရန်ပုံငွေခရီးစဉ်များတွင် လိုက်ပါအားပေးခဲ့ကြသူများအားလုံး နှင့်တကွ ဤလုပ်ငန်းစဉ် အောင်မြင်ရေးအတွက် အသွင်သဏ္ဍန် အမျိုးမျိုးဖြင့် အဖက်ဖက်က ၀ိုင်းဝန်းပံ့ပိုး ကူညီခဲ့ကြသူများ အားလုံးအား အထူးပင် ဂုဏ်ယူလေးစားရပါကြောင်းနှင့် ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိရပါကြောင်း ကော်မတီကိုယ်စား ဂါရ၀ရှေ့ထား အသိပေး ပြောကြားအပ်ပါသည်။ လေးစားစွာဖြင့် မင်းထက်ဇော် အဖွဲ့ဝင် အညတရသူရဲကောင်းဆုကော်မတီ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၁၉) ရက်။ ဆုရရှိသူ ၅ ဦးမှာ အင်းစိန်ထောင်ရှိ ဦးခေမာစာရ (ခ) ကိုချမ်းသာ၊ မြင်းခြံထောင်ရှိ ဒေါက်တာကျော်ကျော်၊ သာယာဝတီထောင်ရှိ မောင်လက်ျာထွန်း၊ မြင်းခြံထောင်မှ လွတ်မြောက်လာသည့် မလှလှမော၊ ပုသိမ်ထောင်မှ လွတ်မြောက်လာသူ ကပ်ခန့်ခွာ (ခ) အန်ထော်နီ တို့ဖြစ်ပါတယ်။ တဦးလျင် မြန်မာကျပ်ငွေ ၁၀ သိန်းနှင့်အတူ အညတရသူရဲကောင်းဆုတံဆိပ်ပါ ပူးတွဲပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 12:25 PM No comments:
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို Amnesty International အဖွဲ့မှ Ambassador of Conscience ဆု ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်သည့် အခမ်းအနားတွင် U2 တေးဂီတအဖွဲ့မှ တင်ဆက်ဖျော်ဖြေခဲ့သည့် Electric Burma Concert - ရုပ်သံအပိုင်း (၁)+(၂)
&amp;lt;p&amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/MITLacOpMVc" frameborder="0" allowfullscreen&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/iframe&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;
(နစ်နေမန်း youtube channel မှ ကူယူဖော်ပြပါတယ်...)
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 12:00 PM No comments:
ဒေါ်စုအား Amnesty International အဖွဲ့ က ချီးမြှင့်တ...
အိုင်ယာလန်နိုင်ငံ Dublin မြို့Bord Gais Energy ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို LSE ကနေ မွေးနေ့လက်ဆောင် (၅) ...
၂ဝဝ၉ ခုနှစ်က ချီးမြှင့်ဂုဏ်ပြုခံရတဲ့ Ambassador of...
ဂျပန် မှာ ဒေါ်စု ၆၇ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ် ငါး...
တတိယအကြိမ်မြောက် အညတရဆုရရှိသူ ဆုရှင် (၅) ဦးအား ချ...